September 2019 – My Life Magazine
तस्बिर: शरद जोशी सिक्किमको निक्कै दुर्गम ठाउँ मानिएको नाम्फिङ मा ३ दिने निःशुल्क आखा शिविर सम्पन्न भएको छ । नाम्फिङ गाउपालिका सिङ्टम्मको आयोजना र रोटरी क्लब अफ बिर्तामोड मिडटाउनको सहयोगमा ३ दिने निशुल्क शिबिर सञ्चालन…
दसैंसम्म मनसुन लम्बिने सम्भावना
मनसुन अझै केही दिन लम्बिने भएको छ। नेपालबाट मनसुन अन्त्य हुने समय सकिए पनि पछिल्लो केही दिनयता निरन्तर रूपमा बङ्गालको खाडीबाट जलवाष्पयुक्त हावा आइरहेकाले दसैंसम्म मनसुन सक्रिय हुने सम्भावना छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग…
मानिसलाई किन निद्राको आवश्यकता पर्छ? कम सुत्नाले के…
AwarenessSeptember 20, 2019
१. मानव जाति एउटा मात्रै प्रजाति हो, जसले जानीजानी आफ्नो सुत्ने समय घटाएर अन्य उद्देश्यहरु पूरा गर्ने प्रयास गर्छ।२. विकशित तथा औद्योगिकीकरण भएका देशमा निद्रा नलाग्ने समस्या विकराल बन्दै छ।३. निद्रा मानव जीवनका लागि अप्राप्य…
AwarenessSeptember 16, 2019
श्रृजना जि.सी. खरेल भनिन्छ, खोपको खोज हुनुभन्दा पहिले संसार निकै खतरनाक थियो । त्यसबेला अनेकन रोगले लाखौं-लाख मान्छेको मृत्यु हुन्थ्यो । खोप चिकित्सा विज्ञानको एक प्रभावकारी उपलब्धी हो । भविष्यमा लाग्न सक्ने कुनैपनि किसिमको संभावित…
सोह्र श्राद्ध सुरु भएको छ । भाद्रशुक्ल पूर्णिमाको दिन पूर्णिमा तिथिको श्राद्ध गरी यसपछि आश्विन कृष्ण पक्षका १५ दिन क्रमशः प्रतिपदादेखि अमावस्या (औंसी)सम्म तिथिअनुसार श्राद्ध गरिने भएकाले यसलाई सोह्र श्राद्ध भनिएको हो । पर्व तिथिका…